हप्ताको सहायक: 08 पाठ - सृष्टिकर्ताको उपासना - 19 सम्म 26 मई 2018 - स्कूल पोर्टल साबिनिन अनलाइन
मङ्गलबार, 25 सेप्टेम्बर, 2018
PPT जानकारीपूर्ण: 13º शनिवार 3Trim18
(13ºSáb 3Trim18-एो सी) प्राथमिक सामाग्री
Jovens: Lição 13: Paulo em Roma XCHARX 22a29 de Setembro 2018
Comentários de Ellen White: Lição 13 XCHARX ViagemaRoma XCHARX 22a29 de Setembro 2018
Primários: Lição 12 XCHARX Finalmente Perdoados XCHARX 22a29 de Setembro 2018
Adolescentes: Lição 13 XCHARX O Sábadoea Lei de Deus XCHARX 22a29 de Setembro 2018
Jardim da Infância: Lição 12 XCHARX O Machado que Flutuou XCHARX 22a29 de Setembro 2018
Juvenis: Lição 12 XCHARX Descobrindo o Amor XCHARX 22a29 de Setembro 2018
व्यसक: पाठ 13 - ट्रिप टू रोम - 22 देखि 29 सम्म सेप्टेम्बर 2018
मुख्य पृष्ठ / हप्ताको आगमन -2° क्वर्टर 2018 / हप्ताको सहयोगी: 08 पाठ - सृष्टिकर्ताको उपासना - 19 सम्म 26 मई 2018
हप्ताको सहयोगी: 08 पाठ - सृष्टिकर्ताको उपासना - 19 सम्म 26 मई 2018
घर 22 मई 2018	हप्ताको आगमन -2° क्वर्टर 2018 टिप्पणी छोड्नुहोस् 992 दृश्य
कुञ्जी पाठ: अपोलिपिप्ट 14: 6
थाह छ: पहिलो स्वर्गदूतको सन्देश र अन्त समयको "वर्तमान सत्य" लाई सम्बन्धित।
महसुस गर्नुहोस्: भय र ईर्ष्याको भावनालाई गहरा र तीव्र बनाउनका लागि परमेश्वरको डर राख्नुहोस्।
के: संसारलाई यो सन्देश घोषणा गर्नुहोस् र परमेश्वर र न्यायाधीश र सृष्टिकर्ताको रूपमा उपासना गर्नुहोस्।
I. Knowing: पहिलो स्वर्गदूतको वर्तमान सत्य
A. पहिलो स्वर्गदूतको वर्तमान के हो?
B. पहिलो स्वर्गदूतको सन्देश किन अन्तको लागि "वर्तमान सत्य" हो?
II। महसुस गर्नुहोस्: परमेश्वरको डर
A. ईश्वरलाई डर राख्ने को मतलब छ? हामीले किन डराउनु पर्छ?
B. परमेश्वरले संसारको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र सबैको न्यायाधीशले अचम्म र इमान्दारतालाई निरीक्षण गर्दछ भन्ने तथ्य यो तथ्य हो? किन?
III। गर्नुहोस्: सन्देश घोषणा गर्नुहोस्
A. हामीले न्यायको सन्देशलाई कसरी प्रचार गर्नुपर्छ?
B. कुन तरिकामा हामी सृष्टिको सत्य घोषणा गर्न आवश्यक छ?
पहिलो स्वर्गदूतको सन्देश सान्दर्भिक र सार्वभौमिक हो किनकि यो संसारको भाग्य संग गर्नु पर्छ।
धर्मशास्त्रमा ध्यान दिँदै: अपोलिपिप्ट 14: 7; ड्यानियल 7: 9-11, 26
आध्यात्मिक विकासको लागि प्रमुख अवधारणा: यदि उपासना आध्यात्मिक जीवनको सार हो भने, यसले हामीलाई प्रेरणा दिनेछ र दैनिक विश्वासलाई पोषण गर्नुपर्छ, जस्तै हामी प्रार्थना गर्छौं, धर्मशास्त्र अध्ययन गरौं र एक समूहमा उपासना गरौं।
शिक्षकको लागि: पहिलो स्वर्गदूतको सन्देशले यस्तो आज्ञा दिन्छ: "परमेश्वरको डर मान्नुहोस्।" परमेश्वरको डरको एक भागमा ईश्वरीय उपस्थितिमा गहिरो अन्तरदृष्टि समावेश छ। विद्यार्थीहरूको हृदयलाई यो तथ्यले प्रभाव पार्छ कि यस धारणाले हाम्रो दिन हरेक दिन र स्थानहरूमा असर पार्दछ।
कुराकानी र प्रारम्भिक गतिविधि: न्यायको सन्देश मानव इतिहासमा कसरी लागू हुन्छ?
शिक्षकको लागि: पहिलो स्वर्गदूतको सन्देशमा दुई सल्लाह दिइएको छ र एक व्याख्या अनुसार। पहिलो अनुभूति भनेको "ईश्वरदेखि भय र उहाँलाई महिमा दिनुहोस्" (एपी 14: 7) प्रतिबन्धित निर्णयको कारण। दोस्रो अनुकरण सृष्टिको ईश्वरीय कार्यहरूको कारण "उपासना" हो। न्याय र सृष्टिको सन्दर्भमा यस अर्थको सही अर्थलाई छलफल गर्नुहोस्। यस अनुच्छेदको सन्दर्भमा यी दुई धारणाहरूमा कस्ता पाठहरू छन्? न्याय र सत्यको सत्यताको अवस्थित घटकहरू अन्वेषण गर्नुहोस् र कसरी उनीहरूको दैनिक जीवनमा प्रतिबिम्बित हुन सकिन्छ। सन्देशको सीधा एपोकिप्टिपिक इरादा बुझ्न दानियल7को सन्दर्भमा पहिलो स्वर्गदूतको सन्देशलाई विचार गर्नुहोस्। "निर्णय र सृष्टि" को बीचको सम्बन्ध के हो?
I. न्यायको सन्देश
(कक्षा एपी 14 को पुन: प्राप्ति कम: 7।)
दुवै बयान, "परमेश्वरको डर" र "उहाँलाई महिमा दिनुहोस्," यस्तै सत्य बोल्छौं: हामीले परमेश्वरलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्छ। परमेश्वरको भयको बाइबलीय अवधारणालाई अन्धकारपूर्ण भावनाहरूसँग केही गर्न को लागी छैन, न त अनावश्यक विचारको साथमा हामीले डरबाट परमेश्वरको सेवा गर्नु पर्छ। "परमेश्वरको डर" अभिव्यक्ति प्रायः बुद्धिको पदहरूमा प्रयोग गरिन्छ जुन चेलाहरूलाई सबै गतिविधिहरूमा ईश्वरीय उपस्थितिको बारेमा जान्न प्रोत्साहित गर्दछ (पीवी 3: 7); यो विचार हो कि हामी परमेश्वरबाट कुनै चीज लुकाउन सक्दैनौं, किनकी उसले सबै कुरा देख्छ। वास्तवमा, दुई शब्दहरू "हेर" र "डर" एउटै रूटबाट आउँछन् (है / raah)। दुई विचार सम्बन्धित छन्: "हेर, परमप्रभुको आँखा उहाँमाथि डरलाग्दो छ" (स्ल 33: 18)। किनकि परमेश्वरले सबै कुरा देख्न सक्नुहुन्छ, लुकेको छ भने, उहाँ न्याय गर्न सक्षम हुनुहुन्छ: "परमेश्वरको डर राख्नुहोस् .... परमेश्वरले सबै कामका निम्ति निर्णयमा ल्याउनुहुन्छ, जुन लुकेको छ, चाहे पनि राम्रो वा खराब "(ईसी 12: 13, 14)।
"महिमा दिने" बाइबिल अवधारणा हिब्रू शब्दलाई बुझाउँछ kabod, जिसका मतलब "भारी"। यसैले, पहिलो स्वर्गदूतको सन्देश एक अपिलेशन हो कि "हाम्रो" धर्म "वजन" [महत्त्व] दिनुहोस्। यो कलको कारण निर्णयको दिन हो। तर, पहिलो स्वर्गदूतले सन्देश केवल घटना घोषणा बारेमा छ "उहाँको न्यायको घण्टा।" यसको सट्टा, सन्देश न्यायको लागि द्रुत कल हो। (:; 14 EC 12 तुलना 12 प्रका 14) यसबाहेक, एउटै बाटो मा, पाठ परमेश्वरको आज्ञाकारी द्वारा विशेषता गर्न "पवित्र", बुझाउँछ।
यसको बारेमा सोच्नुहोस्: निर्णय किन सुसमाचार छ?
II। सिर्जना सन्देश
(Recapitule comaclass Ap 4: 11; SL 95: 6, 7; 100: 3।)
बाइबल अनुसार, सृष्टि भनेको हामीले उपासना गर्नु हो। "तपाईं स्वर्गमा गरेका छन्, तपाईं एक्लै प्रभु हो, आकाश को स्वर्ग र आफ्नो सबै पाहुना [...] प्रेम ते स्वर्गको सेना" (Ne 9: 6) नहेम्याह पुस्तकमा, उपासना सिर्जना गरेर जायज छ। यो प्रकाशको पुस्तकमा पनि सत्य हो। एक उपासनाको सन्दर्भमा, 24 प्राचीन घोषणा: "तपाईं योग्य, हे प्रभु, तपाईं सिर्जना भयो सबै कुरा को लागि, महिमा र आदर र शक्ति प्राप्त गर्न, र तपाईंको इच्छा लागि तिनीहरूले अवस्थित र बनाइयो "(एपी 4: 11)। यो भजनहरू कुनै संयोग छ - जो इस्राएलका आध्यात्मिक जीवन प्रतिबिम्बित र उपासनाको प्रेरित आफ्नो भावना व्यक्त - उपासनाको केन्द्र मा स्थान सेटिङ। हिब्रू क्रियाकलाप गर्ने (hishtakhaweh), जो भजनसंग्रहमा 25 पटक प्रकट हुन्छ, सधैं उपासनाको सन्दर्भमा पाइन्छ। भजनहारवादको लागि, केवल परमेश्वरको उपासना गर्न सकिन्छ, किनकि "यो उहाँले हामीलाई बनाउनुभयो, र हामीलाई आफैलाई होइन" (भज। 100: 3, अल्मेडा सुधार र संशोधन विश्वासी)।
उपासनाको पहिलो बाइबिल खाता निर्माणको ईश्वरीय कार्यमा प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया हो। उपासना केवल मानव मानव कार्य मात्र होइन, तर निर्माणको पहिलो मानव प्रतिक्रिया (जीएन एक्सएनएमएक्सएक्स: 2)। यस कारणको लागि, पहिलो स्वर्गदूतले सब्बथ आज्ञालाई बुझाउँछ, वास्तवमा एउटै शब्दहरू प्रयोगका रूपमा प्रयोग गर्दछ (एक्क्स 3: 20-8)। त्यस समय देखि, शनिबार देखि शनिबार सम्म, मानव जातिले उपासनाको लागि मौलिक उद्देश्य थियो भन्ने सम्झना थियो। एलेन जी। व्हाइट यसो भन्छिन्: "सृष्टिको सम्झनाको रूपमा सब्बथको महत्त्व भनेको साँचो उपासनाको रूपमा रहनु हो कि परमेश्वर किन उपासना गर्नु हो" (ठूलो विवाद, पी। 437)।
यसको बारेमा सोच्नुहोस्: सृष्टिको सम्बन्ध किन उपासना छ? यदि हामीले बुझ्न सक्छौं कि उपासनाले हाम्रो सृष्टिमा विश्वास देखाउँछ, यो तथ्य कसरी उपासना गर्ने हाम्रो बाटो प्रत्यक्ष छ? सृष्टिको लागि सब्बथको प्रतिक्रियाको कुन अर्थमा कुन अर्थ छ? सब्बाथको बीचमा यो सम्बन्ध कसरी र हाम्रो सबथको अनुभवलाई असर गर्छ?
III। न्याय र निर्माणको सन्देश
(Recapitule com एक क्लासिक ईसी 11: 1, 6; 12: 13, 14; एपी 14: 6-13)।
न्याय र सिर्जना बीचको प्रायश्चितको, मात्र तिहार दुई अवधारणाहरु जोडती र सन्दर्भ दानियल7हामीलाई दिन्छ को दिन बुझाउँछ। इस्राएलीहरूलाई लागि, प्रायश्चितको दिन संसारको शुद्धीकरण, साँचो मनोरञ्जन सङ्केत। लेवी 16, प्रायश्चितको दिन प्रमुख पाठ देखि खण्डमा, अभिव्यक्ति "आफ्नो सबै पाप" एक केन्द्रीय र दोहोरिने विचार वा प्रधान विषय (: 16, 21, 22, आदि लेव 30) रहन्छ। प्रायश्चितको दिन यो समय थियो जब "सबै" इजरायलका पापहरू क्षमा भए। इस्राएलका सबै मानिसहरू र पवित्र मन्दिरमा सबै ठाउँ पूर्णरूपले शुद्ध थिए (: 16, 17, 33 लेव 34) त्यो दिन मात्र समय थियो।
मनमा मनोरञ्जनको यो अर्थमा संग, दानियल 2.300 सांझ र बिहान (: 8 दान 14) को अन्त मा अन्त प्रायश्चितको दिन निर्दिष्ट गर्न अभिव्यक्ति "सांझ र बिहान" प्रयोग। यो प्रविधी अभिव्यक्ति मात्र सृष्टिको सन्दर्भ (: 1, 5, 8, 13, 19, 23 उत्पत्ति 31) मा हुन्छ। यद्यपि, यस मार्गले सृजन भन्दा अन्य कुरालाई बुझाउँछ। तीन परम्परागत सेटिङ घटक (आकास, भूमि र समुद्र) को नियमित ढाँचा गर्न विपरीत पानी स्रोतहरु को अप्रत्याशित उल्लेख विशेष महत्वपूर्ण छ। पानी को फव्वारे नयाँ यरूशलेम नियुक्त जहाँ थुमा उहाँको मान्छे जान्छ (प्रका 7: 17, 22: 17)। त्यसै गरी, इजकिएल पुस्तकमा जहाँ त्यहाँ प्रशस्त पानी स्रोतहरु (: 47-1 Ez 12) हो नयाँ यरूशलेम वर्णन गर्दछ।
तीन स्वर्गदूतहरू 'सन्देशहरू समावेश कि apocalyptic पाठ अर्को रोचक विशेषता प्रकाश पुस्तकमा आफ्नो निपटान दानियल7मा apocalyptic पाठ समानान्तर छ भन्ने छ। यो प्रकाश मा तीन स्वर्गदूतहरू 'सन्देशहरू को दृष्टि दानियलको दर्शनको न्याय संग समानान्तर छ भन्ने तथ्यलाई धेरै प्रभावशाली छ! 13-2; Dn 18 तुलना: को प्रकाश निम्न, तीन स्वर्गदूतहरू 'सन्देशहरू को दृष्टि चार जनावर (प्रका7को नै पार्थिव दृश्य पछि, दानियलको पुस्तक निम्न न्यायको स्थान गर्न पत्राचार नै स्थिति मा स्थित छ: 1-8) र मानिसको पुत्र आउँदै (दान7अघि: 13, 14, प्रकाश 14: 14)। यो प्रावधान पृथ्वीमा तीन स्वर्गदूतहरू 'सन्देशहरू को घोषणा स्वर्गमा प्रायश्चितको को दिन समानान्तर छ भन्ने हो।
1। यस तथ्यमा कस्ता पाठहरू समावेश छन् कि पृथ्वीमा तीन स्वर्गदूतहरूको सन्देश उद्घोषणामा स्वर्गको प्रायश्चितको दिन समान हुन्छ?
2। अन्त समयको बयान कुन कुराको समाप्ति दिवस हो?
3। यूहन्नाले किन "असामान्य अभिव्यक्ति" पानीको फव्वारे "थप्नुभयो?
शिक्षकको लागि: हामी त्यो दिन को समापन को अवधि मा रहछन एक साधारण कार्य होइन। प्रायश्चितको दिनका विशेषताहरू व्याख्या गर्नुहोस् र यस सत्यको धनी पाठ देखाउनुहोस्। तपाईंको अस्तित्व र व्यावहारिक पक्षमा जोड दिनुहोस्। दानियल 12 को विश्लेषण: 12 र एटनमेंट को दिन को संदेश मा खुशी को आयाम मा चर्चा गर्नुहोस।
प्रतिबिम्बका लागि प्रश्नहरू
1। प्रायश्चितको दिन मसीहीको दैनिक जीवनमा कसरी लागू हुन्छ?
2। के यो सत्यले हामीलाई अनावश्यक जीवनको नेतृत्व गर्नुपर्दछ? व्याख्या गर्नुहोस्।
शिक्षकलाई: अभयारण्य र विश्रामको दिनका सिद्धान्तहरू दुईवटा सबभन्दा गाह्रो र सारैतिक सिद्धान्तहरू सिकाउँछन्। यस तथ्यलाई सजग हुनुहोस् कि धेरै युवा र पादरीहरूले तिनीहरूलाई सिकाउनदेखि जोगिनै पर्छ। यी विषयहरूलाई dogmatically सिकाउनुहोस्, तर तिनीहरूलाई प्रबुद्ध र आश्चर्यजनक बनाउने तरिकाहरू खोज्नुहोस्।
1। यदि सम्भव छ भने, प्रशासकको चित्रलाई कक्षामा ल्याउनुहोस्, वा विद्यार्थीहरूसँग अभयारण्यको मोडेल निर्माण गर्नुहोस्।
2। प्रायश्चितको दिनको सभाघरको भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्। त्यसपछि ती प्रश्नहरूलाई सोध्नु कुन कुन तत्वहरूले ती प्रभावित गरे।
योजनाहरु योजनाहरु: पाठको अध्ययनको जवाफमा तपाईंको कक्षाले अर्को हप्तालाई के गर्न सक्छ?
अघिल्लो (2ºTrim18) पीपीटी पाठ 13: हाम्रो प्रभुको फिर्ती
अर्को मिशनहरूको जानकारी (वयस्क): ग्याँस स्टेशनमा बैठक - 26 मई 2018
Segunda-Feira, 24 de Setembro 2018 ás 23:56मिनेट।